रामचन्द्र दाइले आवेशमा आएर बोल्नु भयोः महामन्त्री कोइराला - हिमाल दैनिक
बहुमतले निर्णय भएकाे भए त्यहाँ फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखिएको हुन्थ्यो नि!
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १४:४३
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनको समिक्षा बैठकको निर्णय अल्पमत र बहुमतका आधारमा भएको आरोप लगाएपछि पार्टीभित्र मात्रै नभई स्वयं उनैले नेतृत्व गर्दै आएको समूहभित्रै पनि थप विवाद बल्झिने सम्भावना देखिएको छ।
चैत ९ गते सुरु भएर वैशाख १६ गते आइतबार सम्पन्न बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा महामन्त्री शशांक कोइराला र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वसम्मत्तिबाट निर्णय भएको भन्ने अभिव्यक्ति गलत भएको टिप्पणी पौडेलले आइतबार साँझै पत्रकारसमक्ष गरेका थिए।
समिक्षा बैठकको निर्णयमा निर्वाचनको पराजयको जिम्मेवारी सभापतिले लिन तयार नभएकोमा आपत्ति जनाएका पौडेलले विधान बमोजिम पदाधिकारी नियुक्तिका लागि डाकिएको बैठकप्रति समेत आफ्नो आपत्ति रहेको बताएका थिए।
पौडेलले पत्रकारमाझ बैठकको निर्णय प्रक्रियाबारे बोल्दै गर्दा त्यहाँ उपस्थित भएर उनका कुरा सुनिरहेका महामन्त्री कोइरालाले सोमबार पौडेलको भनाईको खण्डन गरेका छन्।
पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धि निर्णयका लागि डाकिएको बैठक स्थगित गरेपछि पार्टी मुख्यालय सानेपाबाट बाहिरिने क्रममा महामन्त्री कोइरालाले पत्रकारसँग कुरा गर्दै हिँजोको बैठकमा सर्वसम्मत्तिले निर्णय गरेको जानकारी पटक पटक दोहोर्याए।
नेता पौडेलले आवेगमा आएर हिँजो साँझ अभिव्यक्ति दिएको प्रतिक्रिया कोइरालाले दिए। कोइरालासँग पत्रकारहरुले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
निर्वाचनको समिक्षा बैठकको अन्तिम दिन आइतबार तपाइसहित पार्टी प्रवक्ताले सर्वसम्मतिबाट केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्यो भन्न नभ्याउँदै नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यसको खण्डन गर्दै अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय भएको भन्नु भयो। यथार्थमा के भएको हो?
याथर्थमै हिँजोको बैठकमा गरिएका निर्णयहरु सर्वसम्मतिमै भएको हो। यदि, त्यहाँ बहुमतले भएको भए अथवा कुनै सदस्यको असहमति जनाएको भए निर्णय प्रक्रियामा विरोध हुन्थ्यो, अथवा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखिएको हुन्थ्यो नि। तर, त्यहाँ केहि पनि भएन। त्यसैले हिँजो भएको निर्णय सर्वसम्मतिबाटै भएको हो।
हिजो आएको दुइथरी अभिव्यक्तिले निर्वाचन परणिामपछि निराश बनेका कार्यकर्तामा कस्तो सन्देश दिएको जस्तो लाग्छ? कांग्रेस एक भएर गएको सन्देश गएको छ कि अझबढी आन्तरिक मतभेद बढ्दै मुठभेढमा जाँदैछ भन्ने सन्देश गएको छ?
रामचन्द्र दाइले मलाई लाग्छ, आवेशमा आएर बोल्नु भएको हो। तर, जुन निर्णय भयो त्यो सर्वसम्मतिले नै भएको हो भन्ने कुरा मिडिया मार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
हिँजो तपाइले नै दिएको जानकारी अनुसार पदाधिकारी नियुक्तिको प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णयका लागि निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको बैठक आज डाकिएको थियो। तर, दुई वर्ष ढिला गरी हुन लागेको पदपूर्ति प्रक्रियामा आज फेरि पौडेल लगायतका नेताहरुले विरोधपछि बैठक पनि स्थगित हुँदा थप केहि दिन अझै ढिला हुने स्थितिमा पुग्यो। यसले पार्टीमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
अब पार्टीलाई एकजुट र एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने समय आएको छ। पदाधिकारीको चयनका लागि डाकिएको बैठक आज मेरै आग्रहमा सभापति शेरबहादुरजीले २१ गतेका लागि सार्न मान्नु भयो। मेरो दृष्टिकोणमा यो तीन दिनभित्र हामी दुबै पक्षका शीर्ष नेता सभापति र वरिष्ठ नेताले आपसी छलफल गरेर निर्णय गर्नु पर्ने हो। यसले मात्रै उर्जा दिन सक्छ। पार्टी एक भएको सन्देश दिन सकिन्छ। यस दिशामा म पनि लाग्दछु। वामपन्थीहरु सबै एक भएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीहरु स साना कुराहरुमा अल्झिएर बस्ने होइन। हामी पनि एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
तपाइले पार्टी एक ढिक्का हुन्छ भन्नु भयो। तर हिँजो एउटा बैठक सकिएलगत्तै आजबाट फेरि अर्को विवाद सुरु भयो त!
यो विवाद होइन। हामी मिटिङ प्वाइन्टमा त आएकै छौ नि। आज सभापति शेरबहादुरजीले बैठक राख्न खोज्नु भयो। मैले नै गएर उहाँलाई भने, आजै बैठक नगरौँ। दुई तीन दिन पर सारेर नेताहरुबीच संयमित भएर छलफल गरौ भने। यो नेताहरुबीच आपसी दूरी नबढोस् भनेर नै गरेको हो नि। अब नयाँ चरणमा प्रवेश भएको छ। यसले पार्टी एकीकृत हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
अब कहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्तिको टुंगो लाग्ला?
सभापतिजी २१ गते हुन्छ भन्नु भएको छ।
त्यो दिन पनि रामचन्द्र पौडेल लगायतका असन्तुष्ट नेताहरु आउनु भएन अथवा आएर असहमति व्यक्त गर्नु भयो भने के हुन्छ?
होइन, उहाँहरु आउनु हुन्छ। सबैलाई मिलाएर अगाडि जाने जिम्मा मेरो पनि त हो नि।
आज तपाइको जिम्मा थिएन?
हाहा!, आज पनि एक गराएर अघि बढाउने मेरै जिम्मा थियो नि। र म केहि हदसम्म आज सफल पनि भएँ भन्ने लागेको छ।
Prevपछिल्लोसाकेला पर्व शुरु
अघिल्लोनेपाल विद्यार्थी संघका सस्थापक सिताराम निरौलाको निधनNext